နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Cydia DEB Files တွေကို ကွန်ပျူတာထဲ ဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲ??
Cydia DEB Files တွေကို ကွန်ပျူတာထဲ ဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲ??
မနေ့ ကပြီးခဲ့တဲ့ BarCamp Yangon မှာ မြန်မာ Mobile App အနေနဲ့ ကျွန်တော် Discussion လေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အစ်ကိုတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းလေးပါ။”iPhone ထဲမှာ WiFi နဲ့ ဒေါင်းထားတဲ့ Cydia Applications တွေကို .DEB Files တွေအဖြစ် ကွန်ပျူတာထဲ ပြန်ဆွဲထုတ်ချင်ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုဆွဲထုတ်ရမလဲ??” ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို အားလုံးသိသွားအောင်လို့ဒီ Tutorial လေးနဲ့ ကျွန်တော် ရှင်းပြပါမယ်။–
ကျွန်တော်တို့Cydia မှာ ဒေါင်းထားတဲ့ Tweaks တွေကို ကွန်ပျူတာထဲ Deb Files အဖြစ် Backup လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Backup လုပ်နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အလွယ်ဆုံး နည်းတစ်ခုကို ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။
အရင်ဆုံး Cydia ထဲမှာ Source တစ်ခု အရင် Add ရပါမယ်။
Cydia >> Manage >> Sources >> Edit >> Add >> http://repo.biteyourapple.net/ ကို Add လိုက်ပါ။
ပြီးရင် BiteYourApple Repo ထဲမှာ BackToDeb ကို ရှာပြီးဒေါင်းလိုက်ပါ။
Cydia ထဲက Down ရအဆင်မပြေတဲ့ သူတွေ အောက်က Link မှာ deb file ထင်ပေးထားပါတယ်။
BackToDeb ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Backup Packages ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Cydia Packages တွေကို Backup လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။
Backup လုပ်ပြီးသွားရင် iDevice ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်။ iTools ကို ဖွင့်ပြီး Filesystem (Jailbreaked) >> Var\_Mobile\_BackToDeb ထဲမှာ ခုနက Backup လုပ်ခဲ့တဲ့ Cydia Applications တွေကို .DEB အဖြစ်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ .DEB Files တွေကို Select လုပ်ပြီး မိမိ Desktop ပေါ် Drag & Drop ဆွဲတင်လိုက်ရုံပါပဲ။
အားလုံး အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်….:)
Posted by Hajee Than Hla Oo at 8:36 PM